Permalink Reply by thinkhaingsoe on September 2, 2015 at 12:53
Permalink Reply by waing chit aung on September 2, 2015 at 13:30
Wonder ကို Dictionary မှာ ရှာကြည့် ရင် အံ့သြခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်ဆို တဲ့ အဓ္ဓိပါယ်ကို တွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ English speaker များက I wonder if I....... , I wonder if you စသည်ဖြင့် သုံးတာ ကြားဖူး၊ ကြုံဖူးပါတယ်။ ဘယ်လို အဓ္ဓိပါယ်မျိုး နဲ့ သုံးတာဖြစ်နိုင်ပါလဲ ခင်ဗျာ...။ ထို့ အပြင် I am wondering ........ ကို ငါလိုက်ရှာ နေတယ် ဆိုတဲ့ အဓ္ဓိပါယ်မျိုးနဲ့ လည်း သုံးနေကြပါတယ်...။ အဲလိုရော သုံးလို့ ရပါလား...။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on September 14, 2015 at 15:06
Permalink Reply by Ko Hein on September 4, 2015 at 13:18
ရုံးလုပ်ငန်းသုံး အင်္ဂလိပ်စာ ရေးတဲ့အခါ ရှောင်ရန်ဆောင်ရန် အသုံးများ သိလိုပါတယ်။ အထက်သိုတင်ပြချက်များ အရေးသားများ ယဉ်ကျေးသော အသုံးများကို သိလိုပါသည်။
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on September 14, 2015 at 15:59
မေးမြန်းခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရုံးသုံးအင်္ဂလိပ်စာနှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်းပါးများကို ဤသင်ခန်းစာများအညွှန်း၏ Business English ကဏ္ဍ တွင် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Jay Jay on September 7, 2015 at 10:41
Hi .. I would like to know how to improve my english gammar skill and writing skill. Pls kindly share me English teach link or book or ebook for development in English
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on September 14, 2015 at 16:02
Hi Jay Jay! We have lots of articles about grammar and writing skills on Myanmar Network. You can findalist of them at this link.
Permalink Reply by Ma Myo Thazin Hlaing on September 7, 2015 at 21:50
must နဲ့ (have,has,had) to ကို ကွဲကွဲပြားပြားသိချင်ပါတယ်ရှင့် ။ Perfect Tense တွေအကြောင်းလဲ သိချင်ပါတယ်ရှင့် သမီးမေးတာလေးတွေကို ပြန်ဖြေပေးနိုင်ရင် ပြန်ဖြေပေးပါရှင့်
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on September 14, 2015 at 15:08
Permalink Reply by nay chi on September 10, 2015 at 19:08
Reporting with passive verbs ကိုအမြန်ဆုံး ရှင်းပြစေချင်ပါတယ်။ဒီလ ၁၄ရက်နေ့စာမေးပွဲဖြေရမှာပါ။ နားမလည်လို့ပါ
Permalink Reply by Mg Maung Myint on September 12, 2015 at 11:25